Daawo Muuqaalka Fanaanada Farxiyo Fiska Oo Ka Yabisay Nimco Yasiin Iyo Ikraan Caraale (Daawo video ) - iftineducation.com
iftineducation.com – Tvga Horn Cable barnaamij uu ka samayay diyaar garowga sanadka cusub, waxaa si layaab leh hal mar Microfonka ula wareegay fanaanada Farxiyo Fiska oo dhagaha ka qabsatay kana yaabisay labada fanaan ee kala ah Ikraan Caraale Iyo Fanaanada Nimco Yasiin.
Fanaanada Fiska ayaa ah fanaaniinta lagu tiriyo in ay leedahay cod aad u dheer oo marna lala tartami karin ,iyada oo lagu tilmaamo in ay tahay hormuudka fanaaniinta Soomaaliyeed ee burburka ka dib fanka ku soo biiray.
Ikraan Caraale ayaa indho bas ka soo haray marka fiirsato muuqaalka yar ee laga samayay barnaamijka Tvga Horn Cable ugu diyaar garobayay sanadka cusub.
Ikraan ayaa meesha laga sugayay in hees bila musig ah ay qaado waxay fiiris ula dhaqaaday fanaanada fiska oo hal mar isku daba dartay heeso badan ay horay u qaaday taas oo si wada jir ah uga yabisay Ikraan Caraale iyo Nimco Yasiin.
Lakiin Nimco Yasiin ayaa sida Ikraan indho ka soo harin balse waxaa iyadana lagu qabsaday cod dheer iyo jiitin aad u dheer oo heesta la jiidayo taas oo Nimco Yasiin La Cajabtay.
Fananada Farxiyo Fiska ayaa ah fanaanada u soo baxday fanka Soomaaliya walow baryahaan danbe fanka laga galiyay muran iyo mashquul kaa oo salka ku hayo dagaalka Faneedka iyada iyo Bashiir Hanuuniyo oo noqday mid joogta ah.
Halkaan Ka Daawo Diyaargarowga Habeenka Sanadka Cusub